Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Daawo Donald Trump ma dhamaysanayo wakhtigiisa guriga cad ” Saadaal uu bixiyay Profissor 30-kii sano ee u dambeeyay mala-awaalkiisu rumoobo”
Daawo Donald Trump ma dhamaysanayo wakhtigiisa guriga cad ” Saadaal uu bixiyay Profissor 30-kii sano ee u dambeeyay mala-awaalkiisu rumoobo”
Profissor 30-kii sano ee u dambeeyay mala-awaalkiisu rumoobo oo sii sadaaliyay guusha Trump lkn uuna dhamaysanayn 4 sano guriga cad.
Professor Allan Lichtman oo wax ka dhiga jaamacada Washington DC wwuxu tan iyo 1984kii saadaalin jiray natiijda tartanka guriga cad. 8 tartan ama 8 madaxweyne ayaa u dhacay sidii uu u sheeegay.
22-sept ee sanadkan wuxu saadaashiisa ku sheegay inuu Trump ku guulaysanayo tartanka guriga cad iyadoo badi dadku ay hadal hayaan Hillary Clinton. Haseyeeshee wuxu sheegay inuuna dhamaysnayn wakhtiga oo maamuus ka xayuubin uu ku samayn doono xisbiga Jamhuurigu,
Donald Trump, Professor Allan Lichtman, tartan, Washington DC
TRUMP oo dhawaan helaya boorsda ugu khatarta badan dunida oo culeyskeedu yahay 20kg Daawo Muuqaal kashifay hadalkii Trump dafiray isagoo leh waan diwaan-galinayaa Muslimka